Yiyiphi imisebenzi lwekhabhinethi?
nekhabhathi chassis yahlukile ukusuka kwikhabhinethi of isefu, nekhabhathi yokufayilisha, ezifana enyulu, nekhabhathi isisu semoto ukongeza kufuneka ukuba ifakwe njengoko kwikhabhinethi kufuneka ukuba ezinye umsebenzi, kodwa abe umoya, kubaluleke ngakumbi obekwe nekhabhathi isisu semoto ngenxa izixhobo, ngoko kukho ezisebenzayo ifuna ...Funda ngaphezulu »
kwikhabhinethi Network, nesetyenziswa ukudibanisa kwiqela lenjongo obandayo, i plug-in, ibhokisi plug-in, eli licandelo lektronikhi, isixhobo kunye namalungu loomatshini amacandelo, ukuze ulibhangise ibhokisi ufakelo. Ngokutsho uhlobo lwangoku, kwikhabhinethi umncedisi, udonga kwikhabhinethi, uthungelwano kwikhabhinethi, CA standard ...Funda ngaphezulu »
1 yamalungiselelo Kuqala kwinto zonke, ukwazisa umsebenzisi kwimeko umsebenzisi aluchaphazeli ukusebenza okuqhelekileyo kwimeko iKhabhinethi. Ke ngokutsho kwinethiwekhi isakhiwo yethopholoji efanayo, izixhobo ezikhoyo, inani labasebenzisi, abasebenzisi kunye nezinye izinto ukuze achaze iintlobo izinto, ezifana ...Funda ngaphezulu »
ikhabhinethi Network kufuneka intsebenzo zobugcisa. Ubume yikhabhinethi kufuneka sisekelwe, iimpawu zombane zomatshini kunye nokusetyenziswa kokusingqongileyo, ukuqinisekisa ukuba isakhiwo yikhabhinethi ibe ngqongqo elungileyo namandla, kwaye bodwa olungileyo umoya, nozinzo, ...Funda ngaphezulu »
E Century amabini ananye, ulwazi nobugcisa liye laba ifomu esiqhelekileyo. Ngapha koko, akukho lwazi malunga nophuhliso lwezentlalo lweli langoku. Eneneni, ulwazi lwe kumazwe ahlukeneyo Lunyawukile mfuno kakhulu, okanye kufuneka ilungiswe ukuze bagqibe. Nangona com jikelele ...Funda ngaphezulu »
Ukhuseleko kunye nozinzo yikhabhinethi ukuba luhlobo luni na utshintsho
Ngophuhliso kunye nokuphuculwa netheknoloji yikhabhinethi, ikhabhinethi sisetyenziswa ngokubanzi kwiinkalo ezahlukeneyo. Ngokutsho nokusebenza ezahlukeneyo izixhobo, ikhabhinethi IKhabhinethi ngokuthe lihamba ngakwicala obungcali. Ukuze ubone ukuba chassi umgangatho ...Funda ngaphezulu »
Ziziphi izinto ezintathu eziphambili ezichaphazela ubomi inkonzo kwenkqubo ngamanzi?
Yonke le mveliso kufuneka ukusetyenziswa ubomi, baya kuba imveliso, sebenzisa, ekupheleni amanyathelo amathathu. Kuba inkqubo ngamanzi, ukuba ukusetyenziswa ixesha elide ekusetyenzisweni ixesha elide, ngoko ke ixesha lokuba sitshintshe. Ezitshintshwayo olubangele nje oqhelekileyo pump ngesanti kubunzulu baphantsi, enyanisweni, iimpembelelo hydraulic ...Funda ngaphezulu »
Indlela yokuthintela zeplastiki ziphene sokubumbela irusi
A lot ngesixhobo ubude eziguquguqukayo ixesha izakuvela imeko irusi. Kwaye lo umhlwa ngayo izinto lwethu but is kakhulu kule meko. Kuba imveliso yethu iya kusetyenziswa ukungunda kuya kwenzeka le ngxaki. Kwaye ngenxa yale ngxaki, kufuneka ukuba kujongwane nazo, yaye uyazi ukuba kutheni kukho isizathu sokuba th ...Funda ngaphezulu »
China Changzhou technology woveliso oluqhubele phambili impumelelo
Seventh China Changzhou technology woveliso oluqhubele phambili impumelelo mboniso fair May 18, 2012 kusasa, owesixhenxe China Changzhou phambili lemveliso iteknoloji impumelelo umboniso fair e Changzhou inzululwazi Technology City iqale. Changzhou city sodolophu Yao Xiaodong p ...Funda ngaphezulu »
yena 2015 Ingxelo uphando ngefuthe kushishino kunye Internet ukuphuhlisa utyalo market elizayo
Xa ulwazi ubudala, ubuchwepheshe Internet liye langena kuzo zonke iinkalo zobomi babantu, ukutshintsha abantu imikhwa yokusebenzisa kunye nendlela yokuziphatha. I-Internet kwakhona luchaphazela kakhulu kwaye ukutshintsha zonke iinkalo zobomi. Emva nezambatho, 3C digital, sixhobo ekhaya Chai ...Funda ngaphezulu »
Ezinye ngeengcebiso ukuthenga cabinet yenethiwekhi
Ngandlel 'ithile, ikhabhinethi womnatha kufana DIY esifakelwe kwisisu semoto, nekhabhathi kunye semoto kunokuthiwa kulingane enye, sibe ukuthenga network isisu semoto apho izakhono na? I Wuhan abenzi cabinet F. zonxibelelwano kunye neenkcukacha. Okokuqala, ikhabinethi inethiwekhi ukuqwalasela ...Funda ngaphezulu »